के तपाईं यी प्रश्नहरूको जवाफ चाहनुहुन्छ? - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अटेसो अट्टी अफ्रिकान्स अबुआ अब्बे अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्टाइ अल्बेनियन अल्बेनियन साङ्केतिक भाषा अस्ट्रियन साङ्केतिक भाषा अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा अहन्टा आइरिस आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इनाकिनन इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इबिन्डा इभातन इयु मिन इलोको इसेकिरी इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उज्बेक उड्मुर्त उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एडो एफिक एम्बेरा (साटिओ) एस्टोनियन एस्टोनियन साङ्केतिक भाषा ओटेटेला ओडिया ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा कमयो कम्बोडियन काचिन काजाक काजाक (अरबी) काडाजान काबाइली काबार्डिन-सर्केस काबीय कालांगा (बोत्स्वाना) कालेनजिन किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किनारा-ए किन्यारवान्डा किपेन्डे किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (चिबुलेओ) कुइचुआ (टिना) कुइचुआ (पास्टाजा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कुर्दीस सोरानी कुहान (सुबिया) केक्ची कोंकनी (देवनागिरी) कोंकनी (रोमन) कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा कोस्रियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्यारिब क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्राशेन क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा खाना खासी गा गाउरानी गाउरानी (बोलिभिया) गारीफुना गालिसियन गिटोंगा गियानिज क्रिओल गुजराती गुना गून गोकाना ग्रीक ग्रीक साङ्केतिक भाषा ग्रीनल्यान्डीक ग्वाटेमाला साङ्केतिक भाषा ग्वाडेलोपिएन क्रिओल घानायन साँकेतिक भाषा चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चीन (हाका) चुकिज चुभास चुवाबो चेक चेक साङ्केतिक भाषा चोपी चोल चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (ग्वेभा) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाम्बियन साङ्केतिक भाषा जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जीवाका जुला जुलू टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टान्ड्रयो टालियन टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टुभिनियन टेटन डिली टोंगन डच डच साङ्केतिक भाषा डाँग्मे डिओला डिगोर डुआला डुसुन डेनिश डेनिश साङ्केतिक भाषा ड्रेहु तरहुमरा (मध्य) ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक तोबा त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई थाई साङ्केतिक भाषा दामारा नजेमा नर्वेली नाभाहो नामा नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ निकारागुआन साङ्केतिक भाषा निकोबारेज नेपाली नोंगा न्दौ न्यानेका न्यु जील्याण्ड साङ्केतिक भाषा न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पलाअन पानामानियन साङ्केतिक भाषा पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पिजिन (पश्चिम अफिका) पिलागा पेज पेन्सिल्भेनिया जर्मन पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पेल्ले पोनापियन पोर्चुगिज पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फटालुकु फन फान्टे फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फुलफुल्डे (क्यामरून) फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा फ्राफ्रा बंगाली बम्बारा बाओले बाश्कीर बासा (क्यामरून) बासा (लाइबेरिया) बास्क बिकोल बिसाउ गिनियन क्रिओल बिस्लामा बुल्गेरियन बेते बेलिज क्रिओल बोउलो बोलिभियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा भोरु मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मझाहुआ मनिपुरी मबुकुशु मराठी मरुसियन क्रिओल मले मलेसियन साङ्केतिक भाषा मल्यालम माकासाई माकुवा माङ्गारेभा माडी मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मायाङ्ग्ना मायो मार्क्युसियन (नुकू हिभा) मार्क्युसियन (हिभा ओ) मार्शलिज मालागासी माल्टिज माशी मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिक्सटेक (ह्वाजुआपान) मिजो मिस्किटो मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेन्तावाइ मेल्पा म्यानमार म्यासडोनियन याकुत्स्क याकुबा यापिज युक्पा युक्रेनियन योरूबा रापा नुई रारोतोंगान रियुनियन क्रिओल रुटोरो रुन्यानकोर रूङ्गुस रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानियन साङ्केतिक भाषा रोमानी (उत्तरी ग्रिस) रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (रोमानिया) लक्जमबर्गियन लाओशियन लाकोटा लाट्भियन लाट्भियन साङ्केतिक भाषा लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लिथुआनियन साङ्केतिक भाषा लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुन्डा लुभेल लेन्जे लो जर्मन लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वाराओ वारे-वारे वास्टेक (सान लुइस पोटोसी) विची वेल्श वोलफ वोलाइटा शिलुबा शुअर शोना श्वा सरमक्कन सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सार्नामी सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिनाम्वांगा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेना सेन्ट्रल अलस्कन युपिक सेपेडी सेबूआनो सेरेर सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोमाली सोलोमन टापु पिजिन स्कटिश गेलिक स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस स्विडिस साङ्केतिक भाषा स्वीस जर्मन साङ्केतिक भाषा हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हन्स्‌रिक हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो होण्डुरस साङ्केतिक भाषा हौसा
के तपाईं यी प्रश्नहरूको जवाफ चाहनुहुन्छ?
कस्ता प्रश्नहरूको? मानिसहरूले अक्सर सोध्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको। सायद तपाईं यस्ता प्रश्नहरूमा घोरिनुभएको होला:
के ईश्वरलाई साँच्चै हाम्रो चासो छ?
के युद्ध अनि दुःखकष्ट सधैं भइरहन्छन्?
मृत्युपछि हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ?
मरिसकेकाहरूलाई फेरि भेट्न पाइएला?
प्रार्थना कसरी गर्ने अनि ईश्वर कस्तो प्रार्थना सुन्छन्?
साँचो आनन्द म कसरी पाउन सक्छु?
यी प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं कहाँ खोज्नुहुन्छ? मानिसहरूलाई सोध्नुभयो भने मान्छेपिच्छे जवाफ पाउनुहुन्छ। धार्मिक नेताहरूलाई सोध्नुभयो भने पनि जवाफ आपसमा बाझिन्छन्। यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ भएको दाबी गर्ने सयौं पुस्तक पुस्तकालय वा किताब पसलहरूमा पाइन्छन्। तर कुरा त्यही हो, एउटा पुस्तकले दिएको जवाफ अर्कोसँग मिल्दैन। अनि कतिपय पुस्तकचाहिं तत्काल व्यावहारिक जस्तो देखिए तापनि समय बित्दै जाँदा काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसपछि ती पुस्तकहरू या त संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ या फेरि नयाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ।
तर भरपर्दो जवाफ दिने एउटा पुस्तक छ। यो पुस्तक सत्य जानकारीहरूले भरिएको पुस्तक हो। परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो: “तपाईंको वचन सत्य हो।” (यूहन्ना १७:१७) आज हामी उक्त वचनलाई पवित्र बाइबल भनेर चिन्छौं। माथि दिइएका प्रश्नहरूको बाइबलले सु-स्पष्ट अनि सत्य जवाफ कसरी दिएको छ, यसपछिका पृष्ठमा त्यसको झलक पाउनुहुनेछ।
प्रश्न उब्जिनुको कारण: क्रूरता र अन्यायले भरिएको संसारमा हामी बाँचिरहेका छौं। थुप्रै धर्मले पनि ‘दुःखकष्ट भोग्नु ईश्वरकै इच्छा हो’ भनेर सिकाउँछन्।
बाइबलको शिक्षा: खराब कुरा ईश्वरबाट कहिल्यै हुन सक्दैन। “परमेश्वरले कहिल्यै खराबी गर्नुहुन्न, र सर्वशक्तिमानले कहिल्यै छल गर्नुहुन्न” भनी बाइबलको अय्यूब ३४:१० भन्छ। मानिसजातिका लागि ईश्वरले मायालु उद्देश्य राखेका छन्। त्यसैले येशूले हामीलाई यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनुभयो: “हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता…तपाईंको राज्य आओस्। तपाईंको इच्छा स्वर्गमाझैं यस पृथ्वीमा पूरा होस्।” (मत्ती ६:९, १०) ईश्वर हाम्रो धेरै चासो राख्छन्। त्यसैले त, आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न ठूलो त्याग गर्नसमेत उनी पछि परेनन्।—यूहन्ना ३:१६.
उत्पत्ति १:२६-२८; याकूब १:१३ र १ पत्रुस ५:६, ७ पनि हेर्नुहोस्।
प्रश्न उब्जिनुको कारण: युद्धको कारण असंख्य मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। मानिसले भोगिरहेका दुःखकष्टले हामी सबैलाई दुःखित तुल्याएको छ।
बाइबलको शिक्षा: पृथ्वीभरि नै शान्ति स्थापना गर्ने समयबारे ईश्वरले अग्रिम वाणी गरेका छन्। उनको राज्यमा मानिसहरूले “युद्ध गर्न सिक्नेछैनन्।” त्यसको साटो, “तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना तरवार पिटेर हलोको फाली” बनाउनेछन्। (यशैया २:४) सबै किसिमका अन्याय र दुःखकष्ट ईश्वरले नामेट पार्नेछन्। यसबारे बाइबलले यसरी प्रतिज्ञा गरेको छ: “[ईश्वरले] तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ, र फेरि मृत्यु हुनेछैन।…शोक, रुवाइ, पीडा फेरि केही हुनेछैन। [अहिलेको अन्याय र दुःखकष्टलगायत] पहिलेका कुराहरू बितिसकेका” हुनेछन्।—प्रकाश २१:३, ४.
भजन ३७:१०, ११; ४६:९ र मीका ४:१-४ पनि हेर्नुहोस्।
प्रश्नको उब्जिनुको कारण: संसारका धेरैजसो धर्मले मान्छे मरेपछि पनि ऊभित्रको आत्मा कहिल्यै मर्दैन भनेर सिकाएका छन्। मरिसकेका हाम्रा पुर्खाको आत्माले जीवितहरूलाई मदत गर्न वा दुःख दिन सक्छन् भनेर कतिपय विश्वास गर्छन्। अनि कतिचाहिं, ईश्वरले खराब मानिसहरूलाई दनदनी बलिरहेको नरकमा सास्ती दिन्छन् भनेर विश्वास गर्छन्।
बाइबलको शिक्षा: मरेकाहरू जीवनरहित हुन्छन्। तिनीहरू सुन्न, देख्न, बोल्न, सोच्न केही पनि गर्न सक्दैनन्। “मरेकाहरूले ता केही पनि जान्दैनन्” भनी बाइबलको उपदेशक ९:५ भन्छ। त्यसैले मरेकाहरूले जीवितलाई दुःख दिन वा मदत गर्न सक्दैनन्।—भजन १४६:३, ४.
उत्पत्ति ३:१९ र उपदेशक ९:६, १० पनि हेर्नुहोस्।
प्रश्नको उब्जिनुको कारण: हामी बाँच्न चाहन्छौं र आफूले माया गर्नेहरूसँगै जीवनको आनन्द उठाउन चाहन्छौं। मरिसकेकाहरूलाई फेरि भेट्ने इच्छा कसलाई पो हुँदैन र?
बाइबलको शिक्षा: मरिसकेका थुप्रै ब्यूँताइनेछन्। येशूले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो: “चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको सोर सुन्नेछन्…[र] निस्किआउनेछन्।” (यूहन्ना ५:२८, २९) ब्यूँताइएकाहरूले ईश्वरको सुरुको उद्देश्य अनुरूपै सुन्दर पृथ्वीमा बस्ने मौका पाउनेछन्। (यशैया ६५:२१-२५) आज्ञाकारी मानिसहरूले त्यसबेला स्वस्थ शरीर पाउनेछन् र अजम्मरी हुनेछन्। बाइबल भन्छ: “धर्मात्माहरूले देश अधिकार गर्नेछन्, र त्यसैमा सधैंभरि रहन्छन्।”—भजन ३७:२९.
अय्यूब १४:१४, १५; लूका ७:११-१७ र प्रेरित २४:१५ पनि हेर्नुहोस्।
प्रश्न उब्जिनुको कारण: वास्तवमा हरेक धर्मका मानिस प्रार्थना गर्छन्। तैपनि धेरैले भने प्रार्थनाको जवाफ नपाएको महसुस गर्छन्।
बाइबलको शिक्षा: प्रार्थना गर्दा एउटै कुरा दोहऱ्याएको दोहऱ्याइ नगर्नू भनेर येशूले सिकाउनुभयो। “प्रार्थना गर्दा अन्यजातिहरू जस्ता व्यर्थै नबरबराऊ,” उहाँले भन्नुभयो। (मत्ती ६:७) ईश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुनेको चाहन्छौं भने उनलाई मन पर्ने तरिकाले प्रार्थना गर्नैपर्छ। यसो गर्न, पहिला त हामीले ईश्वरको इच्छा सिक्नुपर्छ अनि त्यसैअनुसार प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाइबलको १ यूहन्ना ५:१४ यसो भन्छ: “[ईश्वरको] इच्छाबमोजिम हामीले उहाँसँग जे कुरा मागे पनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ
भजन ६५:२; यूहन्ना १४:६, १४ र १ यूहन्ना ३:२२ पनि हेर्नुहोस्।
प्रश्न उब्जिनुको कारण: नाम, दाम र सुन्दरताले मानिसलाई आनन्दित बनाउँछ भनेर धेरैले विश्वास गर्छन्। त्यसैले तिनीहरू यस्तै कुराको पछि लाग्छन्। तैपनि, तिनीहरूले साँचो आनन्द पाएका छैनन्।
बाइबलको शिक्षा: साँचो आनन्द कसरी पाउन सकिन्छ भन्नेबारे येशूले यसो भन्नुभयो: “तिनीहरू पो धन्य हुन्, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्।” (लूका ११:२८) हामीले आफ्नो आध्यात्मिक भोक मेट्न अर्थात् ईश्वर चिन्ने र हामीबारे उनको उद्देश्य जान्ने इच्छा पूरा गर्न कदम चाल्यौं भने मात्र साँचो आनन्द प्राप्त गर्नेछौं। यस्तो आध्यात्मिक सत्य बाइबलमा पाइन्छ। अनि यस्तो सत्य बुझ्यौं भने वास्तवमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, त्यो बुझ्न मदत पाउनेछौं। बाइबल सत्यअनुसार निर्णय लिन्छौं र त्यसबमोजिम गर्छौं भने अझ अर्थपूर्ण जीवन बिताउन सक्नेछौं।
हितोपदेश ३:५, ६, १३-१८ र १ तिमोथी ६:९, १० पनि हेर्नुहोस्।
छवटा प्रश्नबारे बाइबलले दिएको जवाफ सरसर्ती थाह पायौं। के तपाईं अझ बढी बुझ्न चाहनुहुन्छ? सत्य के हो, खोज्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि चाहनुहुन्छ। तपाईंको मनमा यस्ता प्रश्नहरू पनि आउलान्: ‘ईश्वर हाम्रो चासो लिन्छन् भने खराबी र दुःखकष्ट किन रहिरहन दिन्छन्? पारिवारिक जीवन अझै सुखी बनाउन मैले के गर्नुपर्छ?’ यी तथा यस्तै अन्य प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो अनि विस्तृत जवाफ बाइबलले दिन्छ।
तर बाइबलबारे त्यति थाह नभएकोले धेरैजसो मानिस बाइबल जाँच्न अलि हच्कन्छन्। के तपाईं बाइबलबाट यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ पाउन चाहनुहुन्छ? तपाईंलाई मदत गर्न यहोवाका साक्षीहरूले दुइटा बन्दोबस्त मिलाएका छन्।
पहिलो हो—बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? पुस्तक। व्यस्त मानिसहरूलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे बाइबलको स्पष्ट जवाफ दिन यो पुस्तक तयार पारिएको हो। दोस्रो हो—निश्शुल्क गृह-बाइबल अध्ययन कार्यक्रम। यहोवाका साक्षीहरूमध्ये तपाईंकै टोल-छिमेकमा बस्ने अनि सिकाउन सिपालु साक्षी हप्ताको एक पटक केही समय बाइबलबाट छलफल गर्न तपाईंकै घर वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा आउन सक्छन्। यसरी सिक्न पैसा तिर्नु पर्दैन। संसारका लाखौंले यस कार्यक्रमबाट लाभ उठाएका छन्। तिनीहरूमध्ये धेरै जना यस्तो निष्कर्षमा पुगेका छन्: “सत्य वास्तवमा के रहेछ, बल्ल बुझें!”
हामीले पाउन सक्ने सबैभन्दा ठूलो धन यही नै हो। बाइबल सत्यले हामीलाई अन्धविश्वास, अन्योल र डर-त्रासदेखि मुक्ति दिन्छ। यसले हामीलाई आशा, उद्देश्य र आनन्द दिन्छ। येशूले यसो भन्नुभयो: “तिमीहरूले सत्य के हो, सो जान्नेछौ, र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ।”—यूहन्ना ८:३२.
परमेश्‍वरले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो भनी बाइबल भन्छ। तर के उहाँ हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ?
ईश्‍वरले तपाईंको प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्‍न, त्यो कुरा धेरै हदसम्म तपाईं आफैमा भर पर्छ।
बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरू? सही जवाफ पाउनुहोस्‌!